ကျူးလစ်ပန်းရောင်စုံများပွင့်လန်းရာ နယ်သာလန်ရှိ ပန်းဥယျာဉ်ကြီး | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on June 27, 2016 June 27, 2016 by Nu Myat
Me with orange tulips
With Netherlands Ladies
Love this tulipsalot
ကောင်းကင်ကနေ မြင်ရတဲ့ နယ်သာလန် ပန်းခင်းတွေ
လှလါန်းလို့ တင်ပေးထားတာ ပုံက အင်တာနက်ကပါ
အဲ့လှေပေါ် ထိုင်ရိုက်ဖို့ တန်းစီးလိုက်ရတယ် ဆိုတာလေ…
ကြွေထည်တွေနဲ့ ပန်းတွေကို အလှဆင်ထားတာလေ
Windmill ရှေ့က သားအမိ၃ယောကြ်
ဥရောပအနောက်မြောက်ရှိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် လေရဟတ်များ၊ တူး မြောင်းများကြောင့် သာမက မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရသော ကျူးလစ်ရောင်စုံပန်းခင်းများ ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကျော်ကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပန်းနိုင်ငံဟု တင်စားရလောက် အောင် ပန်းခင်းအများအပြားစိုက်ပျိုးထားပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပန်းဥပေါင်း၏ ၆၂ရာခိုင် နှုန်းက နယ်သာလန်မှာ ရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထိုအပင်များအနက် ကျူးလစ် ပင်များမှာ အများဆုံးဖြစ်ကာ စီးပွားဖြစ်အထိ စိုက်ပျိုးကြပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ပန်းဥတင်ပို့မှုနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၉သန်းကျော်ရှိကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ကျူးလစ်ပန်း ခင်းဧရိယာမှာ ဧက ၂၅၀၀၀နီးပါးရှိကြောင်း သိရ၏။
ထိုကဲ့သို့ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော ကျူးလစ်ပန်း ခင်းများရှိရာသို့ စာရေးသူသည် မိသားစုနှင့်အတူ ယခုနှစ်ဧပြီလက အလည်ရောက် ဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ မြို့တော် အမ်စတာဒမ်မှ မြို့ပြင်သို့ ၄၅မိနစ်ကြာ သွားရောက်ရုံဖြင့်ရောက် နိုင်သည့် ကမ္ဘာကျော် Keukenhof (ခရူးကန်းဟော့ဖ်)ပန်းခြံ၌ ကျူးလစ်ပန်းမျိုး စိတ်ပေါင်းများစွာသာမက အခြားပန်းရောင်စုံများစွာကိုပါ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာတွေ့ မြင်ခဲ့ရပါ၏။
ထိုပန်းခြံသည် Lisse မြို့ငယ်လေးတွင် တည်ရှိ၍ ကမ်္ဘာ့အကြီးဆုံးပန်းခြံများ အနက် တစ်ခုဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ၇၉ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် ထိုပန်းခြံ၌ နှစ်စဉ် ပန်းဥ ပေါင်း ၇သန်းနီးပါး စိုက်ပျိုးထားပြီး ကျူးလစ်ပန်းအမျိုးပေါင်းမှာ ၈၀၀ကျော်ရှိပါသည်။ Keukenhof ပန်းခြံ၏ အမည်မှာ မီးဖိုချောင်ပန်းခြံဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး Garden of Europe (ဥရောပ၏ ပန်းခြံ)ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိပါသည်။ မီးဖိုချောင်ပန်းခြံဟု အမည်တွင်နေခြင်းမှာ ၁၅ရာစုဝန်းကျင်က ထိုပန်းခြံနေရာသည် မြို့စားကတော်ကရဲတိုက်ကြီး၏ မီးဖိုဆောင်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များက စိုက်ပျိုးဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။ နောက်ပိုင်း၌ ကြွယ်ဝသောကုန်သည်များ ထိုမြေများ ၀ယ်ယူပြီး ၁၉၄၉ခုနှစ်၌ Lisse မြို့တော်ဝန်မှ ပန်းခြံအဖြစ်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းခြံဖွင့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် ဥရောပနိုင်ငံတ၀န်းရှိ ပန်းစိုက်ပျိုးသူ များအနေဖြင့် မိမိတို့ဖန်တီးထားသော မျိုးစိတ်အသစ်များပြသနိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ အဓိက စီးပွားရေးဖြစ်သည့် ပန်းပင်ကုန်သွယ်တင်ပို့မှုကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပေသည်။
ထိုပန်းခြံကြီးကို ပန်းများပွင့်သည့်ကာလဖြစ်သည့် မတ်လလယ်မှ မေလလယ် အထိ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်လသာ ဖွင့်လှစ်ပြသလေ့ရှိပြီး ကျွန်မတို့ရောက်ခဲ့သည့် ဧပြီလလယ်သည် ပန်းများအစွမ်းကုန်ပွင့်ဖူးဝေဆာသည့် ကာလဖြစ်ကြောင်းသိရပါ၏။ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးအတွင်း၌ အရောင်အသွေးစုံလှသော ပန်းပွင့်လေးများ သူ့ထက်ငါ အလုအယက် ဖူးပွင့်နေကြသလို မွှေးပျံ့သော ရနံ့များကြောင့်လည်း စိတ်ကြည်လင် လန်းဆန်းစေပါ၏။ လှပသော ပန်းခင်းများအပြင် ပန်းဝင်္ကပါ၊ ၁၇ရာစု၊ ၁၈ရာစုများက ရှေးဟောင်းကျူးလစ်မျိုးစိတ်များကို တွေ့မြင်နိုင်သည့် သမိုင်းဝင်ပန်းဥယျာဉ်၊ ကြွေထည်များနှင့် အလှဆင်ထားသည့် ပန်းဥယျာဉ်စသည့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပုံဖော်ထားသည့် ပန်းဥယျာဉ်များကိုပါတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာ အဆောက် အအုံများ၌ ကျူးလစ်ပန်းသမိုင်းကြောင်းနှင့် ဗဟုသုတရဖွယ်ရာများ၊ သစ်ခွပန်းပင် များ၊ ပန်းအလှဆင်ပုံအမျိုးမျိုးကိုပါ ပြသထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ပန်းဥယျာဉ်၏ ယခုနှစ်Theme ဖြစ်သည့် “ရွှေခေတ်ကို ပန်းရောင်စုံများနှင့် ပုံဖော်ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ပန်းခြံတွင်း၌ ကလေးများအတွက် ကစားကွင်း၊ တိရစ်္ဆာန်ရုံအသေးစားနှင့် ပန်းဝင်္ကပါများလည်း ဖန်တီးထားပါသည်။ ပန်းဥယျာဉ် အပြင်ဘက်ရှိ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရသည့် ကျူးလစ်ပန်းခင်းကြီးတွေကြား ၄၅မိနစ်ကြာ လှေစီးနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်စက်ဘီးစီးပြီးလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပန်းခြံသို့ အမ်စတာဒမ်မြို့မှ နေ့ဝက်ခရီးများ စီစဉ်ပေးပြီး မြို့မှ အသွား အပြန် ကားခနှင့် ၀င်ကြေးအပြီး ငါးနားရီခရီးကို တစ်ယောက်လျှင် ၄၉ယူရို ကျသင့်ပါသည်။ ပန်းခြံတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အချိန် သုံးနာရီကျော် လေ့လာခွင့်ရသောကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါက မဖြစ်မနေ သွားရောက်လေ့လာ သင့်ပါ ကြောင်း လက်ဆောင်စကားပါးလိုက်ရပါ၏။
This entry was posted in Europe, Netherlands, Travel, Uncategorized and tagged Europe, Nature, Netherlands, Nu Myat around the World, Travel. Bookmark the permalink.
← My2days Jail Experience in Switzerland
Bruges,afairy tale town of Belgium ပုံပြင်ထဲက မြို့လေးလား ထင်မှတ်မှားရသည့် ဥရောပမှ ရေပေါ်မြို့လေး Bruges →